Toyota Super Custom 2000 (#675219) ကို Pazundaung မြို့နယ... | CarsDB
Lot Number: #675219
Super Custom [ Limited ]
[ 2000 ] Model.
YGN - 8J [ RTA ပြီး ]
1KZ [ Diesel Engine ]
လီဘာကြိုးပျောက် ၊ ရေတိုင်ကီ၂ထပ် ။
Sun Roof / Moon Roof.
[2] Wheel Drive.
Sonar ပတ်လည် ။
ရောက်ရှိကီလို [ 200000 + ]
လိုင်စင်သက်တမ်း [ 2020 June 30 ] ထိ ။
အော်ဆေးပတ်လည် ၊ အော်စတေကာပတ်လည် ဖြစ်ပါတယ် ။
အပြင်ရုပ်အတိုင်း … Good Condition,,***CarsDB တွင်ကြော်ငြာတင်ထားသောကားဟုပြောကာဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်***
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) ကိုစွန်ရဲ မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Toyota Super Custom 2000 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။